I-Top 6 yeGolfers esuka kwi-Big Big Break
Ngubani na owona mgangatho ophezulu wegolfu oza kuphuma kwinqaku leGalofu yeTrafini i -Big Break ? Ngezantsi, sichaza i-Top 6 Big Break breaks. Ngokwenza njalo, sasiqwalasela kuphela abaqhubi be- Big Break baphumelela emva kokuba beboniswe.
Imbali enkulu yokuPhula: i-Casts and Winners
Indlela ye-Big Break champs ihambe ngayo kunye nokuxolelwa kwabo
Matt Nonke nge-trophy emva kokuphumelela kokumema kuka-Arnold Palmer. Sam Greenwood / Getty Izithombe
Wonke umntu, ukusuka kwi- Big Break Mesquite , wathola ukuphumelela kwakhe kokuqala kwePGA Tour ngo-2014 i-Arnold Palmer Invitational. Oko kwamenza waba ngowesibini owayesakuba yi-Big Breaker ukunqoba kwi- PGA Tour (emva koTommy Gainey).
Kwaye ke yonke into ephindaphindiweyo njenge-Palmer field e-Hill Hill ngo-2015, eyenza ibe ngumdlali wokuqala we-PGA Tour winner phakathi kweelum ze -Big Big Break . Yaye yenza uNombolo 1 kwiluhlu lwethu.
Ngethuba lokuphumelela kwakhe kwePalmer yokuqala, kwakungowokugqibela kwexesha lesithathu elipheleleyo kwi-PGA Tour. Kwakudala wayeseziphephe ezimbini kwindawo yesibini kunye nendawo yesithathu, kwaye wagqitywa phezulu njengama-53 kwinqanaba leenkcukacha ze- FedEx .
Kodwa ngo-2014 unyaka wakhe ongcono kunaloo ndawo - okanye ukususela. Wonke umntu wayenama-Top 10 angama-10 elo nyaka, wagqitywa ngowama-33 kwimali yexabiso kunye ne-45 kwi-Fed Ex Cup. Ngo-2015, nangona iphinda iphindwe njenge-API field, Yonke iyancipha ukuya kuma-68 ne-89, ngokulandelanayo, kwizintlu zemali kunye namanqaku.
Kwixesha elifutshane lexesha lakhe kwi- Big Break Mesquite , Yonke yayingama-34 kwi-Nationwide Tour lwemali ye-Tour, ngo-2008, iphumelele i-Nationwide Tour Championship ngo-2009.
Tommy 'Iiglovu ezimbini' Gainey
Yingakho bambiza ngokuthi iTommy Two Gloves (bona iiglafu ezimbini zegalufu kwizandla zikaTommy Gainey?). Todd Warshaw / Getty Izithombe)
Sambona uTommy Gainey kabini kwi -Big Break , kuqala kwiNkcazo-4 kwaye emva kokuphumelela kwi- Big Break VII: Reunion . Emva kokuqala, kwaye emva kwesibini, uGainey wabonisa ukugquma ngempumelelo kwiisekethe eziphantsi kunye neMpumelelo yokuphumelela ngoMvulo . Kodwa ukususela ngo-2008, uye waba ilungu le- PGA Tour okanye iNational Tour.
UGainey wayegijimela kwi-Disney ngo-2008, kwaye wongezelela i-PGA Tour ye-third-place ngo-2011. Ulokuqala lwakhe lwePGA Tour lwenzeka ngo-2012 McGladrey Classic, apho wawadubula khona 60 ekupheleni kweyokugqibela ukuphumelela.
Umsebenzi we-PGA we-PGA we-Tour wahamba ngo-2013 waza waguqa ngaphandle kwe-Top 125 kwirejista yemali, kodwa isikhundla sakhe seqhawe elidlulileyo samnika ithuba lokuhlaselwa kwetyelelo. Kodwa wawa ngaphandle kwindwendwe enkulu ngo-2014 kwaye uye wadlala kwiWeb.com Tour kusukela.
Umntu owayekade ebizwa ngokuthi 'Big Break' onguGolfer Tony Finau. UJared C. Tilton / Getty Izithombe
U-Tony Finau (kunye nomntakwabo uGipper Finau) wayeseGrafu Break Disney Golf xa eneminyaka eyi-19 ubudala.
Wajoyina iinqununu zabadlali abakhulu abavakatye phakathi kwe- Big Break alums ngokuwina iVuerto Rico Open kwi-PGA Tour ngo-2016.
UFuau wadlala uhambo lweWeb.com ngo-2014, ukuphumelela kanye kunye nokufumana ukukhuthazwa kwi-PGA Tour. Njenge-PGA Tour rookie ngo-2015, wagqiba iminyaka engama-40 kwimali kunye neengama-43 kwiinkalo ze-FedEx Cup.
UGerina Piller ufaniswe ngexesha leNdebe yeSolheim ye-2015. Thomas Niedermueller / Getty Izithombe
Wayeyaziwa ngegama lakhe lentombazana, uGerina Mendoza, xa ebonakala kwi- Big Break Island iPrince Edward Island , eyabhalwa ngo-2009. I-Piller yadlala kwi-Futures Tour ukususela ngo-2008 ukuya ku-2010, ukuthumela ii-Top 10 ezigqibeleleyo zigqityiwe ngokubhekiselele kwiindawo ezilandelayo.
Waphumelela kwi-LPGA Tour ngo-2011 ngamandla okugqiba kwakhe kwindawo yesihlanu kwi-2010 Futures money list. Kwaye ngelixa uPiller engakaphumeleli kwi-LPGA, ube ngumdlali ongcono kakhulu oninzi lwe-Top 10s kunye neqela eligijimayo.
Uphule i-Top 20 kwi-LPGA lwemali yoluhlu kunye ne-Top 25 kwi-rankings yehlabathi. Kwaye ngo-2015, uPiller wahamba u-3-0-1 kwiqela le-USA kwiNdebe yeSolheim , kuquka ukucima oko kwavela ekubeni yi-putt yokuphumelela. Piller kuqala wadlala kwiNdebe yeSolheim ngo-2013.
UKristy McPherson waxoshwa ekupheliseni kwesithathu kwexesha kwi- Big Break VI: iNtambo kaZwelonke . Kodwa mhlawumbi wayengaxakekanga kakhulu. Ngethuba eliboniswayo, uMcPherson sele sele eqedile okwesine kwi-list ye-Tour Futures ka-2006, ekufumaneni ubulungu bakhe beLPGA Tour ngo-2007.
Kwaye uMcPherson wayengumdlali we-LPGA onokuqhubekayo emva kweminyaka. Ukususela ngo-2007, wathumela abathathu abagijimi bephelile kwaye baphantse kwi-Top 10s. Uluhlu lwakhe lwemali luphela, ukuqala ngo-2007, lwalu-97, 47, 16 ne-27. Wenza iqela le-US Solheim Cup ngo-2009.
Kodwa umsebenzi wakhe wehla emva koko. Uluhlu lwayo lwemali luphela ngo-2011 no-2012 lwaphuma ngaphandle kwe-Top 50, kwaye liphantsi kwexesha ngalinye. Ngo-2016, wayelahlekelwe yikhadi lakhe lokutyelela.
Amanqaku ayilungu elilitshiweyo kwiNkcazo-8, umxhasi we-Every on the Big Break Meququite , owakhupha umnyaka ofanayo Nitties iphumelele kwi-Von Nida Tour, isekethe yesibini ye-circuit.
Ngo-2009, i-Nitties yadlala indlela yakhe kwi-PGA Tour kwaye yenza u-15 ukusika kwi-27 kuqala, kubandakanywa ama-10 aphezulu. Wagqiba u-88 kwimali yexabiso kunye ne-$ 1 yezigidi. Ngo-2010, wenza kwakhona ukusika kwe-15 kwi-PGA Tour, kodwa uluhlu lwemali lwaye lwagqitywa ukuya ku-134th kwaye walahlekelwa ikhadi lakhe.
Kodwa yena wabuyela ekhaya e-Australasian Tour ngo-2010 kwi-Victoria PGA Championship. Ngo-2011, amaNitties aphumelele kwiSizwe soKhenketho, kodwa nangona oko kugqityiwe ngomhla wama-26 kwirejista yemali-indawo enye iphantsi kakhulu ukufumana kwakhona ikhadi lakhe lePGA Tour . Udlalwa kwiWeb.com.
Camilo Villegas '' iSpider Man 'Indlela yokuFunda imifino
UCharlie Gibson - "I-Big Break VI" Umncintiswano uCharlie Gibson
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwee-Adjectives 'ezimbi' ne 'Averse'?
Izinto ezili-10 ozifundayo ngoDavid Sedaris kwi "Usela ngokufumana"
Isingeniso senja Intelligence and Emotion
Saturn kwiNdlu yesithoba
IYiputa yaseYiputa: Indawo yokuzalwa yeKhalenda yanamhlanje
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Italia yoMculo iTech Subito
Ixesha elide leNkundla ePhakamileyo yeeNkundla ikhonza njani?
Iprojekthi yeGemini: Iimpawu zeNASA zokuQala kwiNdawo